Onye anyị bụ - SS Wooden Products Co., Ltd.
N'ime '70s nke China, mgbe mbụ 8 pcs shelves bụ ndị omenkà nchoputa mere, àgwà na aghụghọ mmụọ aghọwo isi omenala nke anyị.Anyị na-eche mgbe niile ka ndị mmadụ na-emefu obere ego iji chekwaa ma chọọ ụlọ mma ebe obibi na-ekpo ọkụ n'ejighị àgwà ahụ.
Ihe ọ bụghị naanị ụdị ihe ịchọ mma kamakwa ọtụtụ ọrụ nchekwa na ngosipụta, ha nwere ike ịbụ maka ịchọ mma mgbidi na ndozi ụlọ!Ọ bụ ya mere n'oge a, SS Osisi Ngwaahịa edobere shelves ka ọ bụrụ isi nchịkọta ngwaahịa ngwaahịa MDF.
Mgbe afọ 15 nke toro, ọtụtụ n'ime SS osisi ezinụlọ nwere ihe karịrị 10years nka.Anyị abụghị naanị ndị nrụpụta ngwaahịa gị mana ndị na-eweta azịza yana ndị mmekọ azụmahịa na ọrụ anyị.
N'ihi atụmatụ anyị na-aga n'ihu na-ewu ewu, njikwa mma na-enyocha onwe ya yana nguzozi dị mma na ọnụahịa, ngwaahịa anyị na-ewu ewu n'ụwa.Anyị na-atụ anya na onye ọ bụla n'ebe ọ bụla ga-ahụ shelf ma ọ bụ obere arịa ụlọ ọ bụla ọzọ dabara na ohere ya nke ọma na SS Wooden Products na ọnụ ahịa ọnụ ọnụ ma nwee obi ụtọ na anyị!
Aro gị ga-eme ka anyị dịkwuo mma na ekele!
N'ime ụlọ ọrụ ngwá ụlọ, anyị na-aghọta na ọ na-abịa na-eji nke ọma ime ụlọ mkpa ohere, mgbe onye ọ bụla na-achọ ndị mara mma n'ụlọ na n'ime ime mma, na-ejide-elu trendy nke ime ụlọ.
Ngwaahịa SS Wooden, nke dị na mpaghara a na-emepụta arịa ụlọ, ka emepụtara iji nye gị mmepụta na nguzozi kachasị mma na ọnụ ahịa, ọrụ kacha arụ ọrụ na nke nwere ọrụ enwere ike:
- ugboro 2 nke mmepụta ngwaahịa ọhụrụ kwa afọ
- Ihe nlele agba efu nke kaadị agba agba PVC kacha ọhụrụ
- Akụkọ nyocha nyocha ụlọ kachasị ewu ewu